ဘာကြောင့် Google Universal Analytics ကိုအဆင့်မြှင့်တင်သင့်သလဲ Martech Zone
ဘာကြောင့် Google Universal Analytics ကိုအဆင့်မြှင့်သင့်သလဲ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 15, 2014 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 19, 2014 Tim Flint
ဒီမေးခွန်းကိုအခုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ သင်အဆင့်မြှင့်သင့်ပါတယ် Google ၏ Universal Analytics အသစ်? ဟုတ်တယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ သင်သည်အများအားဖြင့် Universal Analytics သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဂူဂဲလ်ကသင့်အကောင့်ကိုအဆင့်မြှင့်တာကြောင့်သင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်သင် Universal Analytics အကောင့်အသစ်ထဲကနေအကျိုးအပြည့်အဝရယူနေတယ်ဆိုတာမဆိုလိုပါဘူး။
အခုပဲ, Google က Universal Analytics မှ ယင်း၌တည်ရှိ၏ တတိယအဆင့် ၎င်း၏မိတ်ဆက်ခြင်း၏။ အကောင့်အများစုသည်အလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်ထားသည်။ တကယ်တော့သင်ဟာဗားရှင်းဟောင်းကိုတောင်ရွေးလို့မရပါဘူး analytics တော့ဘူးအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်သည့်အခါ။ Universal Analytics သည်ပထမဆုံး beta မှထွက်သောအခါကုမ္ပဏီအများအပြားအတွက်အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုကျန်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကမင်းကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ကြော်ငြာအင်္ဂါရပ်တွေပါ စာရင်း retargeting။ အခုဆိုရင် display features တွေဟာ Universal Analytics (UA) ထဲကိုအပြည့်အ ၀ ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီ၊ ဆိုလိုတာက UA နဲ့သွားဖို့အကောင့်အသစ်တစ်ခုကိုမတားဆီးနိုင်ဘူး။ သို့သော်၊ ဤအရာသည်သင်၏အကောင့်ကိုအဆင့်မြှင့်ထားခြင်းသာဖြစ်သောကြောင့်အဆင့်မြှင့်တင်ချိန်တွင်သတိထားရမည့်အရာများမရှိသေးဟုမဆိုလိုပါ။
အခုအချိန်မှာသင့် site ပေါ်ရှိ code သည် ga.js, urchin.js (သို့) WAP မူကွဲများကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ဂူဂဲလ်ရောက်ရှိသည့်အခါ code ကိုအသစ်ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ Universal Analytics မှအဆင့်မြှင့်၏အဆင့်လေး။ အဆင့် (၄) ကိုစတင်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာတွင်၊ ထိုမူကွဲပုံစံများကိုကန့်ကွက်လိမ့်မည် ထို့အပြင်၎င်းသည်ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည့်ဇာတ်ညွှန်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ သင့်တွင်လက်ရှိအချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုနေသောစိတ်ကြိုက် variable များ (သို့) အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသော variable များရှိပါက၎င်းတို့ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုနိုင်ရန်စိတ်ကြိုက်အတိုင်းအတာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရမည်။
ဂူဂဲလ်၏အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်သင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးရန်သာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုဖြန့်ချိပြီး အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အချိန်ယူပါကသင်တစ်ခါမျှမသိဖူးသောအရာများကိုတိုင်းတာရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ပလက်ဖောင်းအသစ်ကသင့်ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်
အသုံးပြုသူ၏ ID ကိုတည်ထောင်ပါ
Google တွင်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်နည်းလမ်းသုံးခုရှိသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် analytics.js၊ iOS နှင့် Android အတွက်မိုဘိုင်း SDK များ၊ နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး - ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာများအတွက်တိုင်းတာခြင်း protocol ။ ထို့ကြောင့် Google Analytics တွင်သင်အလိုရှိပါကသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ကော်ဖီစက်ကိုသင်ယခုခြေရာခံနိုင်သည်။ လူများသည်တိုင်းတာမှုဆိုင်ရာ protocol ကိုအလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည် In-store foot traffic၊ အပူချိန်နှင့်အခြားအရာများကိုတွက်ချက်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်လာမယ့်အင်္ဂါရပ်အသစ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေဟာတကယ်ကိုအဆုံးမဲ့ပါပဲ။
စိတ်တိုင်းကျအတိုင်းအတာများနှင့်စိတ်ကြိုက်မက်ထရစ်များသည်ထုံးစံအပြောင်းအလဲဟောင်းနွမ်းသောဗားရှင်းသာဖြစ်သည်။ သင့်အားဤရှုထောင့်အသစ်များကမည်မျှအစွမ်းထက်သည်ကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးရန် Yelp ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည့်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူတစ် ဦး မှလက်မှတ်ထိုးသည့်အခါသူတို့ကိုမေးခွန်းများစွာမေးသည်ဆိုပါစို့။ သူတို့ကိုသင်ခေါ်ဆိုသည့်ထုံးစံအတိုင်းအတာရှိသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုသင်မေးနိုင်သည် အကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်အမျိုးအစား။ ဤမေးခွန်းများ၏အဖြေသည်မက္ကဆီကန်အစားအစာ၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ဆိုင်များစသဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်တစ်လလျှင်မည်မျှအကြိမ်မည်မျှစားသည်ကိုနောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းတစ်ခုမေးနိုင်သည်။ ဤအရာသည်သင့်အားစိတ်ကြိုက်မက်ထရစ်အသစ်တစ်ခုကိုပေးသည် ပမာဏကိုတစ်လလျှင်ထွက်ကိုစားကြလော့ သို့မဟုတ် AEOM ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ site ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုကြည့်ရှုရန်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူများကိုခွဲထုတ်ရန်သင်၏အချက်အလက်များကိုယခုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်ပတ်လျှင် ၅ ကြိမ်စားသောအသားညှပ်ပေါင်မုန့်ဆိုင်များကိုနှစ်သက်သူများကိုသင်ခွဲနိုင်သည်။ သင်၏ကွန်ရက်ရှိအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို၎င်းသည်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းကိုသင်၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများထဲသို့ထည့်သည့်အခါဖြစ်နိုင်ခြေများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်ဤခြေရာခံခြင်းကိုသင်၏မိုဘိုင်းဂိမ်းတွင်ထည့်ပါကဖောက်သည်များကစားနေသည့်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
သုံးစွဲသူများသည်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုနေကြသောကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များအကြားကူးပြောင်းနေကြသောကြောင့်ရိုးရာနှင့်လစဉ်သင်၌ထူးခြား။ တက်ကြွသောအသုံးပြုသူမည်မျှရှိသည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှမသိနိုင်ပါ။ analytics။ ယခုအခါသင်၏အသုံးပြုသူများအားသင်သတ်မှတ်ထားသော Custom ID တစ်ခုဖန်တီးခြင်းဖြင့်သင်၏ site ကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဝင်ရောက်ရန်သူတို့၏ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နှင့်လက်ပ်တော့များကိုအသုံးပြုသူကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သို့အသုံးပြုနေသည်စသည်တို့ထက်ပိုမိုသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာနှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆရေတွက်သုံးစွဲသူများကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ဒေတာကိုလမ်းပိုမိုသန့်ရှင်းတယ်။
တိုးမြှင့်ထားသောအီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများဖြင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀ ယ်သူများမည်သည့် ၀ င်ငွေနှင့် ၀ င်ငွေမည်မျှရှိသည်ကိုမရှာဖွေပါနှင့်။ ၀ ယ်ယူမှုမည်သို့အဆုံးသတ်ခဲ့သည်ကိုရှာဖွေပါ။ သင့်အနေဖြင့်ဖောက်သည်များကသူတို့၏လှည်းများထဲသို့မည်သည့်အရာများထည့်သည်၊ သူတို့လှည်းပေါ်မှဖယ်ထုတ်ခြင်းကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာများကိုသင်ရလိမ့်မည်။ သူတို့သည်ငွေရှင်းလျှင်မည်သည့်အချိန်တွင်ငွေပြန်အမ်းခံရသည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုသည်သင်၏ site အတွက်အရေးကြီးသည်ဆိုပါကပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာပါ ဒီမှာ ကြည့်ဖို့အများကြီးပိုပြီးလည်းမရှိအဖြစ်။
ဒီမှာဘယ်လိုဗီဒီယိုလဲ စျေး Google Universal Analytics ကိုအသုံးပြုနေသည်။
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? သင်သုံးစွဲနိုင်သောအချက်အလက်အသစ်များကို အသုံးချ၍ သင့်ဖောက်သည်များအားထုတ်ကုန်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်သည်။
Tags: analytics googleဂူဂဲလ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမင်္ဂလာပါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဂူဂဲလ်သရုပ်ခွဲကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါGoogle Analytics ကိုအဆင့်မြှင့်ပါတစ်လောကလုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှအဆင့်မြှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကဘာလဲအဘယ်ကြောင့်တစ်လောကလုံးသရုပ်ခွဲမှအဆင့်မြှင့်
Tim Flint သည်သမ္မတဖြစ်သည် မီးကျောက် Analytics မှဒစ်ဂျစ်တယ်အေဂျင်စီသည်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုရှိသောမီဒီယာ၊ ဝက်ဘ်သရုပ်ခွဲမှုနှင့်ကုမ္ပဏီငယ်များအတွက်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ သူလည်းတည်ထောင်သူဖြစ်သည် Indy Smartupsစတင်တည်ထောင်သူများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကိုသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်အောင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင်ကြားပေးသောလစဉ်တွေ့ဆုံမှုအုပ်စု။